Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Mpitantana maro an'isa indrindra no manatrika ny International Hotel Investment Forum 2018
Tale jeneralin'ny hotely 80 mahery no hanatrika ny IHIF 2018 izay hatao ao amin'ny Hotely InterContinental any Berlin amin'ny herinandro ambony. Ity dia maneho ny isan'ny CEO indrindra amin'ny orinasa hotely tonga nanatrika ny hetsika tamin'ny tantarany 21 taona.
Tess Pearson, talen'ny hetsika ho an'ny IHIF dia nilaza tamin'ny anaran'ny Questex; “Tsy misy hetsika hafa fotsiny izay manintona ity laharam-pahefana mpanatanteraka ity manerana ny indostrian'ny hotely. Marika iray amin'ny fiaraha-miasa marina eran'izao tontolo izao ary faly izahay afaka mandray hetsika iray izay ananan'ny indostrian'ny hotely, amin'ny ambaratonga ambony indrindra, mahazo lanja amin'ny fanatrehana. ”